Nicole Prause သည် YBOP ကို၎င်း၏ဝဘ်ဆိုက်အား Cease & Desist စာဖြင့်အတုအယောင်ဖြင့်ခြိမ်းခြောက်ခြင်းအားဖြင့် (၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ) - Your Brain On Porn
Nicole Prause သည် YBOP ကို၎င်း၏ web host အားအတုအယောင် Cease & Desist စာဖြင့်ခြိမ်းခြောက်ခြင်းအားဖြင့် (၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ)
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် UCLA သုတေသီဟောင်းနီကိုးလ်ပရပ်စ် ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဂယ်ရီ Wilson က, နှောင့်ယှက် libeling နှင့် cyberstalking စတင်ခဲ့သည်။ ခဏတာအတွင်းသူမသည်သုတေသီများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ၊ ကုထုံးပညာရှင်များ၊ စိတ်ပညာရှင်များ၊ UCLA လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်း၊ ယူကေပရဟိတလုပ်ငန်းများ၊ အချိန် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအများအပြားပါမောက္ခ IITAP, ခါးပန်းက The New ကိုမူးယစ်ဆေး, ထှကျမွောကျရာ Cry, NoFap.com, RebootNation, YourBrainRebalanced သည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ် Fight အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ MDPI အမေရိကန်ရေတပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များသည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၏ဦးခေါင်းကို CUREUS, နှင့်ဂျာနယ် လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း (Prause ၏အန္တရာယ်ရှိသောအစီရင်ခံမှုပုံစံကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း PDF).
2019 ခုနှစ်တွင်သူမ၏ပစ်မှတ်အချို့အလုံအလောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ (ယူဆောင်လာခဲ့သည်) အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုတွင်တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသည် Donald ဟီလ်တန်, MD နှင့် Nofap တည်ထောင်သူဖြစ်သည် အလက်ဇန်းဒါး Rhodesအသီးသီး) တစ် ဦး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုကိစ္စနှင့် ကိစ္စတွင်ကီထိုင်တံဆိပ်.
သူမနိုးထနေသောအချိန်များကိုသူတစ်ပါးအားအနှောင့်အယှက်ပေးနေစဉ် Prause သည်ပါးနပ်စွာပျိုးထောင်ခဲ့သည် သုညအတည်ပြုသက်သေအထောက်အထား - သောဒဏ္.ာရီ သူမက "သားကောင်" ခဲ့ porn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်လက်ရှိသုတေသနအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သောသူမ၏ပြောဆိုချက်များကိုသဘောမတူဝံ့သူမည်သူမဆိုအများဆုံးဖြစ်သည်။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများအားတန်ပြန်ရန် YBOP သည် Prause ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်ဖိအားပေးခဲ့သည်။ အောက်ပါစာမျက်နှာများကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ (ထပ်ဆင့်ဖြစ်ရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဖေါ်ခြင်းတွင်လွတ်လပ်ခြင်းမရှိကြောင်း Prause ၏သားကောင်များကထပ်မံအပြစ်ပေးခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ )
သူမအယောင်ဆောင်သည့်အပြုအမူအားသက်သေပြရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင် Prause YBOP ၏ဝဘ်ဆိုက်သို့အတုအယောင် ၃ ခုနှင့်မအောင်မြင်သော၊ DMCA နှုတ်ယူခြင်းများကိုတင်သွင်းထားသည်သူမ၏အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတွစ်တာများကိုဖယ်ရှားရန်ကြိုးစားခြင်း ဘယ်အချိန်မှာ အခြေအမြစ်မရှိ DMCAs ပျက်ကွက်, Prause ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ် Gary Wilson ၏ URL (yourbrainonporn.com) နှင့်သူ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ် (yourbrainonporn) ခိုးယူခြင်းနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်သည့် site တစ်ခု (www.realyourbrainonporn.com) နှင့်ဆက်စပ်သော Twitter အကောင့် (@BrainOnPorn).
အထက်ဖော်ပြပါအရာများအားလုံးသည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Prause ၏နောက်ထပ်ကြိုးပမ်းမှုနောက်ခံဖြစ်သည်။
၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလ။ ။ ချီးမွမ်းရန်ကြိုးစားသည် သက်သေအထောက်အထားသင်္ဂြိုဟ် YBOP ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အားအတုအယောင်များနှင့်ခြိမ်းခြောက်ခြင်းအားဖြင့်၊
ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ WILSON အထိ
သင့်တွင်တည်ခင်း content ည့်ခံသောအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ နီကိုးလ်ပရာ့စ်ထံမှအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတောင်းဆိုမှုကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိပါပြီ
သင့်အားအောက်ပါတို့နှင့်ပါ ၀ င်ခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည့်ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်လုံခြုံစိတ်ချရသောအိမ်အက်ဥပဒေအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည် - မည်သူ့ကိုမျှစီးပွားရေး၊ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုမှအင်တာနက်ပေါ်တွင်အိမ်လိပ်စာ၊ အိမ်ဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ်လူသိရှင်ကြားလူသိရှင်ကြားဖော်ပြခြင်းမပြုရပါ။ အောက်ဖော်ပြပါတစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အတူတူပင်အိမ်လိပ်စာတွင်နေထိုင်သောပရိုဂရမ်တွင်ပါ ၀ င်သူသို့မဟုတ်အခြားသူများ၏ပုံရိပ်:
(က) တတိယလူကိုစာတိုက် (သို့) ပြသခြင်းတွင်ဖော်ထုတ်ထားသူသို့မဟုတ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဤအန္တရာယ်ကိုကျူးလွန်ဖွယ်ရှိသောလူကိုအန္တရာယ်ကျရောက်စေရန်တွန်းအားပေးပါ။
(ခ) တင်သူ (သို့) ပြသမှုတွင်ဖော်ထုတ်ခံရသူကိုသူသို့မဟုတ်သူနှင့်တွဲဖက်နေထိုင်သူအားသူသို့မဟုတ်သူမ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုကိုဓမ္မဓိreasonable္ဌာန်ကျကျကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာကြောက်ရွံ့စေသည့်နည်းလမ်းဖြင့်ခြိမ်းခြောက်ပါ။
ဤတောင်းဆိုချက်သည်ထပ်မံဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုအတွက် Safe At Home ပြဌာန်းချက်အားအလွဲသုံးစားပြုခြင်းထက်မကပါ။
နီကိုးလ်ပrause၏အိမ်လိပ်စာနှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များသည်မပေါ်ပါ www.yourbrainonporn.com။ ကျွန်ုပ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိ Prause ၏တစ်ခုတည်းသောပုံရိပ်သည်ဖန်သားပြင်များဖြစ်သည် သူမ၏ကိုယ်ပိုင်တွစ်တာများ ဆိုလိုသည်မှာ၊ တွစ်တာတင်ထားခြင်းဖြစ်သည် သူမ။ သူနှင့်အခြားသူများသည်ထောင်နှင့်ချီသောသို့မဟုတ်အလားတူရုပ်ပုံများကိုဝက်ဘ်ပေါ်တွင်နေရာချထားသည်။ Prause ၏ပုံများကိုရာနှင့်ချီသောဆောင်းပါးများနှင့် Prause ၏ twitter အကောင့်နှင့် Facebook စာမျက်နှာနှစ်ခုတွင်တွေ့ရသည်။ https://twitter.com/NicoleRPrause, https://www.facebook.com/nprause, https://www.facebook.com/LiberosCenter/.
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိသူမ၏တွစ်တာများ၏ဖန်သားပြင်များသည်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိလုံခြုံမှုရှိသည့်အိမ်အက်ဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ဆိုလိုသည်မှာအောက်ပါတစ်ခုခုကိုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိခဲ့ပါ။
Prause ၏လက်ရှိအတုအယောင်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ရပ်တန့်ရေးစာသည် Linode သို့လိပ်မူ။ ဤစာမကျြနှာ ၂ ခုတှငျဖျောပွထားသညျ့အတိုငျးကြှနျုပျနှငျ့အခွားသူမြားကို ၇ နှစျနှစျတာနှောငျ့ယှကျမှုနှငျ့အသရေဖျက်မှုသမိုင်းတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ဒါက 4th Yicopop မှသူမကိုယ်တိုင်ဂရုတစိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုသက်သေအထောက်အထားများရရှိရန် Nicole Prause သို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်စားလှယ်များသည် Linode ကိုဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာယခင်က ၃ ကြိမ်နှင့် Prause သည် Linode ကိုခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ သင်မြင်သည်အတိုင်း, သုံးခုစလုံးကိုအကျဉ်းချုပ် Linode အားဖြင့်ပယ်ချခဲ့သည်:
Nicole Prause သည်လူနှစ် ဦး အားအသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲဆိုနေကြောင်းသင်သိရန်အရေးကြီးသည်။ ငါ (Prause ၏အခြားသားကောင်များအများအပြားကဲ့သို့) နှစ် ဦး စလုံးတရားစွဲမှုအတွက်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုကျမ်းကျိန်လွှာတင်သွင်းခဲ့ကြသည်။ တရားစွဲမှု ၂ ခုပါသော YBOP စာမျက်နှာများ -
၁) ဟီလ်တန် v ချီးမွမ်းခြင်း။ https://www.yourbrainonporn.com/relevant-research-and-articles-about-the-studies/critiques-of-questionable-debunking-propaganda-pieces/donald-hilton-defamation-lawsuit-against-nicole-prause-17-page-complaint-on-may-8-2019-pdf/
2) Rhodes v ။ ချီးမွမ်း။ https://www.yourbrainonporn.com/relevant-research-and-articles-about-the-studies/critiques-of-questionable-debunking-propaganda-pieces/nofap-founder-alexander-rhodes-defamation-lawsuit-against-nicole-prause-liberos/
ဒီအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမှာပါ ၀ င်ခဲ့တဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တွေအတွက်ဒီအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုလက်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ (မကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းဆိုင်ရာကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာတင်ပြီးနောက်) ကိုလည်းချိုးဖောက်ခဲ့သည် ကျွန်တော့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ URL ပါ အဖြစ်ကောင်းစွာ၎င်း၏နာမကိုအမှီ။ ဤနေရာတွင်စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ပါ: https://www.yourbrainonporn.com/relevant-research-and-articles-about-the-studies/critiques-of-questionable-debunking-propaganda-pieces/porn-addiction-deniers-www-realyourbrainonporn-com-engage-in-trademark-infringement-campaign/#yboptrademark
သူမ၏ tweets များ၏ပုံများကိုကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှဖယ်ရှား။ မရပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့သည် Safe At Home ၏ပြဌာန်းချက်ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းမရှိပါ။ အကယ်၍ Linode သည်ကျွန်ုပ်၏လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အခွင့်အရေးကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်ပါကကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအခြား server တစ်ခုသို့ရွှေ့ပြောင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအဆင့်ကိုမပြုလုပ်လိုသော်လည်း Prause ၏ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုသင်သဘောပေါက်ရမည်ဟုသင်ခံစားရပါကကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာကိုအခြားအိမ်ရှင်ထံသို့ဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သောအချက်အလက်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ဂယ်ရီ Wilson က
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုတင်ဆက်သွယ်ရေး၏သေံသင်၏ရပ်တည်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စာနာဖော်ပြမလျှင်ငါ့တောင်းပန်ပါတယ်။ မစ္စ Prause နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုများသည်ယခင်ကကဲ့သို့ပင်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့် ပတ်သက်၍ မစ္စ Prause ၏ဖြစ်နိုင်ချေတောင်းဆိုမှုများရှိကြောင်းကိုသာသင့်အားအကြံပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ Mra Prause ၏အိမ်လိပ်စာသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုသင်မထုတ်ပြန်ရသေးကြောင်းအတည်ပြုရန်။
ဤရည်ရွယ်ချက်အရ၊ Linode သည်အချိန်တိုအတွင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ရန်အရင်းအမြစ်များစွာရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သည် (မစ္စ Prause ၏ယခင်ကိစ္စများကဲ့သို့) အလွဲသုံးစားမှုတောင်းဆိုမှုများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အလေးအနက်ထားသည်၊ သို့သော်ဖောက်သည်များအားလုံးကိုထောက်ခံသူများအနေဖြင့်မခိုင်မြဲသည့်အစီရင်ခံစာများကိုတားဆီးရန်အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဆောင်ကြသည်။
ယခုအချိန်တွင်မစ္စပရာ့စ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုပ်ဆောင်ရန်တောင်းဆိုမှုများမပေးထားသောကြောင့် Linode သည်မည်သည့်အရေးယူမှုကိုမျှပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောတောင်းဆိုမှုများအား Linode မှတရားဝင်ပေးပို့ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Linode ၏နောက်ကွယ်ကြိုးပမ်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားအကြံပေးသင့်သည်။
YBOP သည် Prause ၏အိမ်လိပ်စာသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုထုတ်ဝေခြင်းမပြုကြောင်း Linode ကအတည်ပြုခဲ့သည်။
Prause သည်လုပ်ဆောင်နိုင်သောတောင်းဆိုမှုများ (ဥပမာလိပ်စာပါသည့်စာမျက်နှာများ URL) ကိုမအောင်မြင်ပါ။
အရင်ကကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏ဝဘ်ဆိုက်ကို Prause ၏မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များနှင့်မလှည့်စားခဲ့ပါ သားကောင် - ပါးပျဉ်း၏လုပ်ကြံပုံပြင်များ။ ငါသည်ဤသူမ၏နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသံသယရှိကြသည်။ သူမဘာပဲကြိုးစားပါစေသူမကျင့် ၀ တ်မှုနှင့်တရားမ ၀ င်သောအပြုအမူများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်စာမျက်နှာများသည် YBOP တွင်ဆက်လက်ရှိနေလိမ့်မည်။
ပြီးခဲ့သည့်လအနည်းငယ်အတွင်း Prause သည်သူမ ၀ င်လာသည့်ကမ္ဘာသို့တံပိုးမှုတ်ခဲ့သည် Safe At Home အစီအစဉ်။ သူမအခြေအနေကိုကျွန်ုပ်မသိသော်လည်း Prause မကြာသေးမီကတရားရုံးဖိုင်ထဲမှာဆိုလို သူမကငါ (ဂယ်ရီ Wilson)၊ အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ် (နှင့်ဒွန်ဟီလ်တန်) ကသူမကိုနောက်ယောင်ခံနေသောဟန်ဆောင်မှုအောက်တွင်အစီအစဉ်ကို ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်ဟု (နှင့်တွစ်တာတွင်) ဒါအမှန်ပါပဲအဲလက်စ်ရော့ဒ် နှင့် ဒွန် Hilton အခြားစွပ်စွဲချက်များအရသူတို့သူမကိုနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်နေသည်ဟူသောမှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များကြောင့် Prause ကိုတရားစွဲနေကြသည်။ အကယ်၍ Prause သည်ကျွန်ုပ်တို့မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမလုပ်သင့်ဟုမှားယွင်းသောဟန်ဆောင်မှုဖြင့် Safe At Home အစီအစဉ်တွင် ၀ င်ရောက်ပါကသူသည်ပရိုဂရမ်ကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားပြုခြင်းများပြုလုပ်သည်။
အဘယ်ကြောင့် Prause မှားယွင်းသောဟန်ဆောင်အောက်မှာ Safe At Home အစီအစဉ်ကိုဝင်မည်နည်း သူမ၏သားကောင် - ပါးပျဉ်းလက်နက်များနှင့်သူမ၏ဝေဖန်သူများဆင်ဆာလုပ်ဖို့ကြိုးစားရန်။
သူမ၏အပြုအမူ chronicling စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ဂရုတစိုက်မှတ်တမ်းတင်အဖြစ်စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2), သူမရှည်လျားသူမကအညှာနှင့်နှောင့်ယှက်၏သားကောင်ဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခဲ့သည် အဖြစ်မှန်မှာတော့ Prause သည် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ။ ဥပမာ၊ သူမသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သည့်အမြင်များကိုကိုင်တွယ်သောသို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်လူ ၂၀ ကျော်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများအားတရားမ ၀ င်တိုင်ကြားချက်များတင်သွင်းခဲ့သည်။ Prause ၏အန္တရာယ်ရှိသောအစီရင်ခံမှုပုံစံကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း PDF.
သူမအနိုင်ကျင့်ခံရသူများကနှောင့်ယှက်ခြင်းသို့မဟုတ်အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းခံရကြောင်းတရားဝင်သက်သေအထောက်အထားများအရ၎င်းမှာမရှိပါ။ Prause ၏သက်သေအထောက်အထားမရှိခြင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်စစ်ဆေးခဲ့သည် ဂျာနယ်လစ် Diana Davisonရေးသားသူ The Post Millennial နီကိုးလ် Prause အပေါ် '' ဖော်ထုတ်။ မှတ်ချက် Diana Davison Prause အကြောင်းဗီဒီယိုအောက်မှာ:
အိမ်တွင်းလိပ်စာများနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များထုတ်ဝေခြင်းကိုတားမြစ်သည့် Safe At Home ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ချိုးဖောက်နေသည်ဟုမှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များဖြင့်ဝေဖန်သူများအားဆင်ဆာဖြတ်တောက်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ - YBOP သည် Prause ၏အိမ်လိပ်စာသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုတစ်ခါမှမထုတ်ဖေါ်ခဲ့ပါ။ Prause ၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရပ်များကသူမအမှန်တကယ်အမှန်တကယ်အရက်သောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဂရုမစိုက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အထိ (သူမအစီအစဉ်သို့ဝင်ပြီးလအနည်းငယ်) အထိ, Prause ၏စီးပွားရေးလိပ်စာ (သူမ၏အစားထိုး Safe At Home လိပ်စာထက်) သူမ၏ LinkedIn စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဂုဏ်ယူစွာပြသခဲ့သည်။ သူမ၏ရုံပို အတုသားကောင် - ပါးပျဉ်း.
နောက်ဆုံးသတင်း (၂/၁၀/၂၀၁၀) - Prause သည်လိမ်လည်မှုများစွာကိုတွစ်တာ (၁) YBOP တွင်သူမ၏လိပ်စာပေါ်လာသည်၊ (၂) CA ရှေ့နေချုပ်သည် Linode အား YBOP မှလိပ်စာများကိုဖယ်ရှားရန်အတင်းအကြပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ (၃) Staci Sprout & I မှ သူမ၏အိမ်လိပ်စာကို“ အွန်လိုင်း” တင်ခြင်း။
သူမ၏အတုအယောင် C&D စာတွင်ကြိုးပမ်းမှုကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းအားတုံ့ပြန်မှု, Prause သည်သူမ၏အန္တရာယ်ရှိသော De-platforming နှင့်နှောင့်ယှက်မှုအားထုတ်မှုများ (Linode tagging) ကိုထောက်ခံရန်အတွက် Twitter သို့သွားခဲ့သည်။ သူမသည်တစ် ဦး နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည် လိမ်ညာမှု မှလွဲ၍ တွစ်တာသုံးခုဆက်တိုက်။ ပထမဆုံးတွစ်တာမှာသူမ၏လိပ်စာသည် YBOP နှင့်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည် နှစ်ခုလုံး LAPD နှင့် California ရှေ့နေချုပ်တို့ပါ ၀ င်သည်။
အထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း Prause သည်ဤအခိုင်အမာထောက်ခံမှုအတွက် screenshot သို့မဟုတ် URL ကိုတစ်ခါမျှမပေးခဲ့ပါ။ သူမ၏အိမ်လိပ်စာသည် YBOP တွင်တစ်ခါမျှမရှိသောကြောင့်သူမလုပ်နိုင်သည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှေ့နေချုပ်မှကျွန်ုပ်နှင့် Linode ကိုဆက်သွယ်မှုမပြုခဲ့ပါ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏ဝဘ်ဆိုက်မှ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများကိုအတည်ပြုသည်။ Prause ၏လိပ်စာသည် YBOP တွင်မရှိပါ။
YBOP သည် Prause ၏အိမ်လိပ်စာသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုထုတ်ဝေခြင်းမဟုတ်ကြောင်း Linode ကအတည်ပြုခဲ့သည်။
Prause သည်လုပ်ဆောင်နိုင်သောတောင်းဆိုမှုများ (ဥပမာလိပ်စာပါသည့်စာမျက်နှာများ၏ URL များ) ကိုမအောင်မြင်ပါ။
သူမ၏အတွက် ဒုတိယ tweet YBOP အပါအ ၀ င်မည်သူမျှသူမ၏အိမ်လိပ်စာကိုမည်သူမျှမဖော်ပြနိုင်ကြောင်း Prause flat ကဝန်ခံသည်။ သူမ၏တင်ထားသောလိပ်စာအားလုံးသည်အတု (သူမတွင်အသုံးပြုသည့်လိပ်စာအပါအဝင်) သူမ၏အန္တရာယ်ရှိတဲ့အမေရိကန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာ ငါ၏အမှတ်တံဆိပ် YOURBRAINONPORN နှင့် YOURBRAINONPORN.COM) ကိုရယူရန်။ သူမ၏တွစ်တာသည်ကျွန်ုပ်သည်“ သူ၏လိပ်စာကိုအခြားအကောင့်တစ်ခုမှဖြန့်ဝေနေသည်” ဟုမှားယွင်းစွာဖော်ပြထားသည်။ သူမသည်သူမကိုယ်တိုင်မိမိကိုယ်ကို ၀ န်ခံသောလိမ်လည်လိပ်စာကိုဖြန့်ဝေရန်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုနေသည့် (စိတ်ကူးစိတ်သန်း) အကောင့်ကိုမဖော်ပြနိုင်ပါ။ (ဘာကြောင့်သူမမထားဘူး အမှန်တကယ်သက်သေအထောက်အထားပေး?)
နောက်ပြီး? ချီးမွမ်း ငါမဟုတ်ဘူး, အ Stalker ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့, Prause ယခုနှစ် ဦး စလုံးသူမ၏နောက်ယောင်ယောင်စွပ်စွဲမှုအတွက်မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲမှုအတွက်နှစ် ဦး ချင်းစီအားဖြင့်အသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲဆိုလျက်ရှိသည် (Donald ဟီလ်တန်, MD နှင့် Nofap တည်ထောင်သူဖြစ်သည် အလက်ဇန်းဒါး Rhodes) ။ သူမအရာတစ်ခုမှန်တယ်။ stalkers အမြဲမြင့်တက်.
ဒီမှာပါ တတိယ tweet ပိုပြီးမုသားနှင့်ဆန့်ကျင်အတူ။ tweet #2နဲ့မတူပဲသူမကအခုငါတို့အားလုံးရဲ့လိပ်စာကိုသိပြီလို့ပြောတယ်။ (သူမဘယ်တော့မှမတင်ခဲ့လျှင် - သူမကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခြင်းဖြင့်)
“ ဝါကြွား” “ ဒါကိုကြိုက်ဖို့နောက်လိုက်များ”? ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုသူဘာကြောင့်မရိုက်နိုင်တာလဲ။ သူတို့လုပ်ကြံလို့ပဲ
နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် Prause က CA ရှေ့နေချုပ်ကသူမ၏တွစ်တာတောင်းဆိုချက်ကိုချက်ချင်းအရေးယူခဲ့ပြီး Linode အား YBOP မှသူမ၏လိပ်စာအတုကိုဖယ်ရှားခိုင်းခဲ့သည် ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး
ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်“ Self- own” တွင်သူမသည် YBOP ၏လက်ရှိစာမျက်နှာမှကောက်နုတ်ချက်ကိုတွစ်တာတွင်ရေးသားခဲ့သည် -
ငါ Prause ၏လိပ်စာသည်သူမ၏ LinkedIn စာမျက်နှာနှင့်သူမထိန်းချုပ်ထားသောအခြားဆိုင်များတွင် (၂/၁၂/၂၀၁၀ တွင်) ရှိနေသေးသည်ကိုယခုမြင်တွေ့ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Prause ၏တွစ်တာသည်သူမအား Staci Sprout ကိုအသရေဖျက်ခြင်းနှင့်နှောင့်ယှက်ခြင်းတို့ဖြင့်အဆုံးသတ်ထားသည်။ Sra နှင့် IITAP ကိုတံဆိပ်တပ်။ သူမ၏ smear လှုပ်ရှားမှုကိုဖြန့်ဝေရန်ကြိုးပမ်းသည်။ သို့သော် IITAP ၏ဥက္ကhas္ဌရှိပါတယ် တင်သွင်းကျမ်းကျိန်လွှာ Prause ဆန့်ကျင်သောအသရေဖျက်မှုဝတ်စုံအတွက်နှင့် SASH သည်ကောင်းစွာသတိပြုမိသည် Prause ရဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှု၏။
Prause သည်ရှေ့နေချုပ်၏စီအိုင်အေရုံးမှ YBOP မှသူမ၏လိပ်စာကိုဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်နေသည်။ ငါရှေ့နေချုပ်နှင့်အဆက်အသွယ်စတင်ခဲ့သည်။ ဤအီးမေးလ်တွင်ရှေ့နေချုပ်က Prause ၏လိပ်စာသည် YBOP တွင်မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုသည်။
သတိပေးချက် - ချီးမွမ်းခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသည် Sprout သည်ပျဉ်ပြားများကိုသတင်းပို့ပြီးသူမကိုရှုတ်ချကာခြိမ်းခြောက်သောစာများပေးပို့ခဲ့သည်။ နမူနာတစ်ခုအတွက်အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်၏အသရေဖျက်မှုဝတ်စုံတွင် Sprout ၏ကျမ်းကျိန်လွှာကိုကြည့်ပါ။ ပြကွက် ၁၀ - Staci Sprout၊ LCSW ကျမ်းကျိန်လွှာ (စာမျက်နှာ ၁၅ ပါ).
UPDATE: အမှတ်စဉ်အနှောက်အယှက်ပေးသူ / အသရေဖျက်မှုအပေါ်ဥပဒေရေးရာအောင်ပွဲများနီကိုးလ်ပရာ့စ် - သူမသည်ကျူးလွန်ခံရသူမဟုတ်ဘဲကျူးလွန်သူဖြစ်သည်!
သူမကတရားရုံးမှာလိမ်ပြောပြီးသူမရဲ့အိမ်လိပ်စာကို YBOP မှာတင်လိုက်သည်။ တရားစွဲဆိုမှုတွင်တရားစွဲဆိုမှုအတွက် Prause ၌သက်သေအထောက်အထားမရှိသဖြင့်ကျွန်ုပ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည် အဓိကအချက် - တရားရုံးမှ Prause သည် YBOP ၏အိမ်လိပ်စာနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်ကြောင်းနှစ်ကြိမ်သက်သေပြခဲ့သည်။
အောင်ပွဲခံနံပါတ် ၁ - ၂၀၂၀၊ မတ်လတွင်၊ Prause သည်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်သူမ၏ပုံမှန်လိမ်လည်မှုများ (ငါ့ကိုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲနေသည်ဟုမှားယွင်းစွပ်စွဲခြင်း) ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်ကိုဆန့်ကျင်ရန်အကြောင်းမဲ့ယာယီတားဆီးမိန့်ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ တားမြစ်ထားသည့်အမိန့်တောင်းခံရန် Prause ၏တောင်းဆိုချက်အရသူမသည် YBOP နှင့် Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်၏လိပ်စာကိုတင်ခဲ့သည်ဟု (မိမိကိုယ်ကိုလိမ်လည်ခြင်း) (မုသားသက်သေခံမှုသည် Prause တွင်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ) ။ တရားမ ၀ င်စနစ် (TRO) ကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းဖြင့်ငါ့ကိုနှုတ်ဆိတ်။ နှောင့်ယှက်ရန် Prause ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိပြည်နယ်ကောင်တီအထက်တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်ကိုတားမြစ်သည့်အမိန့်ရယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် (အများပြည်သူပါဝင်မှုကိုဆန့်ကျင်။ မဟာဗျူဟာမြောက်တရားစွဲဆိုမှု) (အများအားဖြင့်“ SLAPP ဝတ်စုံ”) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။။ အနှစ်သာရအားဖြင့်တရားရုံးက Prause သည် Wilson အားတိတ်ဆိတ်စွာအနိုင်ကျင့်ရန်နှင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိရန်အမိန့်ပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အားအလွဲသုံးစားပြုသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဥပဒေအရ SLAPP ၏စီရင်ချက်က Prause အား Wilson ၏ရှေ့နေစရိတ်ပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။
အောင်ပွဲခံနံပါတ် ၂ - 22 ဇန်နဝါရီလ 2021 ရက်နေ့တွင်ကြားနာမှာ အော်ရီဂွန်တရားရုံးကကျွန်ုပ်၏မျက်နှာသာပေးမှုကိုစီရင်ပြီး Prause အားကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ထပ်မံပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်. ဤသည်ပျက်ကွက်အားထုတ်မှုတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် တစ်ဒါဇင်တရားစွဲမှု လူသိရှင်ကြားခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပြီးခဲ့သည့်လများအတွင်းတင်သွင်းခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာမတော်မတရားသတင်းပို့ခံရပြီးနောက်သူမအားထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူများအားနှုတ်ပိတ်ရန်အမှန်တကယ်တရားစွဲဆိုမှုများ၏ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အနီးကပ်ဆက်ဆံမှု နှင့်သူမ၏မလိုတမာသောအပြုအမူသို့မဟုတ်သူမအပေါ်လက်ရှိလှုပ်ရှားနေသည့်အသရေဖျက်မှု ၃ ခုတွင်ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုသူ